कसरी बढ्यो तरकारीको भाउ ? व्यवसायी भेला भएर यसरी तोक्छन् मूल्य | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-11-18T00:59:47.706519+05:45
कसरी बढ्यो तरकारीको भाउ ? व्यवसायी भेला भएर यसरी तोक्छन् मूल्य
personपत्रपत्रिकाबाट access_timeकात्तिक २७, २०७४ chat_bubble_outline0
गत शुक्रबार राति १२ बजे आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोली कालिमाटीस्थित तरकारी बजार पुग्यो । त्यतिखेर ट्रकमा तरकारी आइरहेका थिए । आजकोनयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
दुई समूहमा रहेका अनुगमन टोलीमध्ये एउटाले ना.६ख ४५६६ नम्बरको ट्रकमा आएको तरकारीको विवरण र खरिद मूल्यको बिल माग्यो । मेचीनगर–१७, काँकडभिट्टा झापामा रहेको एसएसबी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सको ट्रकमा काउली, भिन्डी, परवल र भ्यान्टा गरी कुल सात हजार पाँच सय किलो आयात भएको थियो ।
तर, बिलमा उल्लेख भएको मूल्य अपत्यारिलो थियो । किनभने सबै तरकारी प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले खरिद गरी कालिमाटीस्थित जयसवाल एसके स्टोरले ल्याएको थियो ।
बिचौलियाका कारण महँगियो : अधिकारकर्मी
दुईतिहाइ बहुमतको दुरुपयोग
राष्ट्रपति भण्डारीको दबाबमा एकेडेमी हटाएर हेलिप्याड !